यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! कसरी बेश्ने त ….? पुरा पढी सेयर गर्नुहोस – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! कसरी बेश्ने त ….? पुरा पढी सेयर गर्नुहोस
मेरि बास्सैकि चम्सुरि यतिधेरै धनी, आलिसान घर साथमा कार! हेर्नुस् घर र छोरि (हेर्नुस् भिडियो )